अब तराई-मधेशमा आन्दोलन हुन्छ : बावुराम भट्टराई
समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्षद्वय उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराईले अन्ततः ११ प्रदेशको प्रादेशिक संरचना नै वैज्ञानिक रहेको भन्दै त्यसको लागि तराईमा संघर्ष हुने उद्घोष गरेका छन् । मंगलवार धनगढीमा कैलाली कञ्चनपुरका थारु अगुवा, मुक्तकमैया लगायतसँगको भेटघाटको क्रममा अध्यक्षद्वय यादव र डा. भट्टराईले सो कुराको घोषणा गरेका हुन् ।
सरकारका उपप्रधान एंव स्वास्थ्य तथा मन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष यादवले भने, ‘थरुहट आन्दोलन नितान्त राजनीतिक आन्दोलन हो । यसमा मेरो पनि संलग्न छ । टीकापुरमा कार्यक्रम गर्दाताका बाटोमा अवरोध हुँदा जंगलको बाटो भएर म पनि फर्केकै हुँ । यो मुद्धा राजनीतिक भएकोले फौजदारी न्यायको हिसाब कुनैपनि हालतमा निकास दिँदैन । राजनीतिक ढंगले नै निकास हुन्छ ।’
उनले हालको ७ प्रदेशको प्रादेशिक संरचनाले पनि दिगो निकास दिन नसक्ने टिप्पणी गरे । नेपालमा थारु, मधेशी, दलित, जनजातिलगायत उत्पीडनमा परेका समुदायको माग मुद्धा सम्बोधन गर्न १० जोड १ प्रादेशिक संरचना नै वैज्ञानिक रहेकोले आफूहरू अझैपनि १० जोड १ प्रदेशको मान्यतामा आडिग रहेको बताएका हुन् ।
मन्त्री यादवले अगाडि थपे, ‘हामीले प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गर्न र बाँकी संविधान संशोधन प्रक्रियाबाट हासिल गर्न सरकारमा गएका हौं । तर अझैपनि हाम्रो माग यथावत नै छ । संविधान संशोधन भएन भने तराई-मधेशमा आन्दोलन हुन्छ ।
सो पार्टीका अर्का अध्यक्ष भट्टराईले हालसम्मको राजनीतिक परिवर्तनलाई अपूूरो क्रान्तिको संज्ञा दिदै सबै असन्तुष्ट पक्षको माग सम्बोधन गर्न १० जोड १ को प्रादेशिक संरचना उपयुक्त रहेको बताए । उनले हालै लोक सेवा आयोगले खुला गरेको विज्ञापनले हालसम्म भएका अधिकार प्राप्तिका संघर्षको विरुद्धमा रहेको खारेज गर्नुपर्ने बताए ।